Xasan Shiikh Oo Shacabka Ugu Hambalyeeyey Maalinta Calanka – VIDEO | Somalia News
Xasan Shiikh Oo Shacabka Ugu Hambalyeeyey Maalinta Calanka – VIDEO
Madaxweynihii hore ee dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa ugu hambayeeyey shacabka Soomaaliyeed sanadguurada 66aad ee kasoo wareegtay maalintii la taagay Calanka Soomaaliya.
Madaxwayne Xasan ayaa sheegay in xukuumaddii uu hoggaaminaayay ay suurgalisay in calanka dib looga taago deegaanno badan.
“Ilaaheey fadligiis, Dadaalka halyeeyadeena iyo haggaaminteena waxaan ku guuleysannay in Calankeena cirka u eg dib looga taago gobolla badan oo ka dul babado”.
Xasan Shiikh Maxamuud ayaa ka sheekeeyay taariikhdii iyo halgankii kala duwanaa ee loo soo maray calanka, umadda Soomaaliyeed ayuu ku booriyay in qiimeynta calanka kor loo qaado, 66-sano guurada maalinta calanka awgeedna guryaha, goobaha ganacsiga iyo meel weliba laga taago calanka si loo weyneeyo maalintan qiimaha badan.
Previous articleShabaab oo weerar culus ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada dalka Itoobiya
Next articleTurkey oo qaadday tallaabo ka careysiisay Greece